Sierra Leone: Crystal achiudzwa kwekuenda
VANOGARAMO 1 109 511 431
VAPARIDZI 1 538 897
ZVIDZIDZO ZVEBHAIBHERI 4 089 110
Akanyengeterera Kuti Awane Matsi
Crystal, mumishinari ari mundima yemutauro wemasaini kuSierra Leone, akamuka mangwanani ndokunyengeterera kuti awane matsi paaizoenda kunoparidza. Mangwanani iwayo, paaitsvaga mumwe munhu waakamboparidzira, akafamba nemugwagwa waakanga asingawanzofambi nawo. Akabvunza vavakidzani kana vaiziva panogara matsi, uye vakabva vamuudza musha wavaiziva. Asvika ipapo, akawana mumwe musikana aiva neushamwari, uyo akafarira zvaakaparidzirwa uye akati aida kuuya kumisangano yemutauro wemasaini. Vamwe vanhu vakazoudza Crystal paaigona kuwana imwe matsi. Saka akabva awana imwe matsi yaitsvaga chokwadi. Kunyange zvazvo akanga amboparidza mumugwagwa iwoyo kakati kuti, haana kumbobvira asangana nematsi idzi mbiri dzaakaona musi uyu. Crystal anoti aisazombokwanisa kuwana vanhu ivavo vanofarira kudai akanga asina kubatsirwa naJehovha.
“Hurukuro Iyi Yanga Yakagadzirirwa Ini!”
Emmanuel, wekuLiberia, aityaira akananga kuImba yeUmambo kunopinda musangano wekupera kwevhiki. Akaona mumwe mukomana ainge akachena asi achiratidza kuti pane zvaimudya mwoyo. Emmanuel akabva amira kuti aone kana mukomana uyu aida rubatsiro. Mukomana wacho akati anonzi Moses. Akanga abirwa mari yake yese usiku hwainge hwapfuura, saka ainge ava kufunga kuzviuraya. Emmanuel akateerera zvaitaurwa naMoses ndokubva ati, “Handei tese kuImba yeUmambo.” Vakabva vaenda vese. Moses akabayiwa mwoyo nezvaakanzwa zvekuti akasvimha misodzi. Hurukuro yavose payakapera, Moses akabva ati: “Hurukuro iyi yanga yakagadzirirwa ini! Handisati ndamboona vanhu vakaita seZvapupu zvaJehovha.” Musangano pawakapera, Moses akabvuma kudzidza Bhaibheri uye iye zvino ava kugara achipinda misangano.
Aminata, musikana ane makore 15, anodzidza kuGuinea-Bissau. Paaiva nemakore 13, mudzidzisi wavo akati kirasi yese idhirowe mamask nezvimwe zvinhu zvine chekuita nemhemberero yecarnival. Aminata akabva adhirowa mhuka nezvirimwa ndokunyora kuti “Paradhiso” pane zvaakanga adhirowa. Mudzidzisi paakatora zvakanga zvadhirowewa, akaudza Aminata kuti zvaakanga adhirowa zvakasiyana nezvaakanga anzi adhirowe, ndokubva amupa zero. Pavakanga vapedza kudzidza, Aminata akaenda kunoona mudzidzisi uya ndokumubvunza kuti, “Carnival yakatangwa naani?”
“Yakatangwa nevahedheni,” akadaro mudzidzisi wacho.
Guinea-Bissau: Aminata achidhirowa “Paradhiso”
Aminata akati: “Handisi muhedheni, saka handipembereri mhemberero dzakadaro. Ndinotenda kuti Mwari achachinja pasi rino kuti rive paradhiso, saka ndizvo zvandadhirowa.” Mudzidzisi wacho akazochinja bvunzo yacho ndokumupa yekuita zvekunyora yaiva nemamakisi 20. Aminata akawana chii? Akawana 18.
Pakauya Vanhu Vakawanda
Rimwe boka riri kwaro rega mune mumwe musha uri kuMalawi rine vaparidzi 7. Vanoungana panzvimbo yavakavaka nematanda, uswa netsanga. Hama dzeko dzakakurudzirwa nekushanya kwemutariri wedunhu zvekuti dzakashingaira pakukoka vanhu kuti vauye kuChirangaridzo cherufu rwaKristu. Mukurukuri akapa hurukuro yeChirangaridzo achivhenekerwa nemarambi ainge akasungirirwa mudenga. Pamusangano uyu paiva nevanhu vakawanda chaizvo. Chimbofungidzira kuti vaparidzi vacho 7 vakanzwa sei pavakazonzwa kuti paiva nevanhu 120!
Malawi: Paiva nevanhu 120
Bhurocha Racho Rakamubatsira Muwanano Yake
Chirongwa chekuparidza munopfuura nevakawanda mumaguta chinowanzova nemibayiro isingakurumidzi kuoneka. Muguta reLomé, kuTogo, mumwe mukadzi akaenda patafura yaiva nemabhuku achizeza, ndokutora bhurocha rinonzi Mhuri Yenyu Inogona Kufara. Zvapupu zvaivapo zvakabva zvakurukura naye kwenguva pfupi zviri pana VaEfeso 5:3. Vakabva vapanana nhamba dzefoni. Papera mavhiki maviri, mukadzi wacho akafona ndokuti: “Kutaura chokwadi, ndaisafarira Zvapupu zvaJehovha. Asi ndakaverenga bhuku racho uye ndakarifarira chaizvo. Rakatondibatsira kugadzirisa zvimwe zvinhu zvanga zvisiri kufamba zvakanaka muwanano yangu, uye ndakatobatsirawo dzimwe mhuri mbiri. Maonero andaiita Zvapupu zvaJehovha ainge akarasika. Ndinokumbirawo kuti muuye kuzodzidza neni Bhaibheri.” Mukadzi uyu akabva atotanga kudzidza Bhaibheri uye imwe yemhuri mbiri dzaakanga ambobatsira yakatangawo kudzidza.
Ankasie itaundi diki riri kuGhana. Mumugwagwa wemo munenge muine vanhu vashoma vachishambadzira zvavanenge vachitengesa. Asi musi weMuvhuro wega wega munomiswa chingoro chemabhuku. Enoch paakaparidzirwa neimwe hama yaivapo inonzi Samuel, akatora bhurocha rinonzi Teerera Mwari ndokubvunza Samuel kana aiva nemabhuku emutauro wechiKusaal.
Ghana: Akashandurira bhurocha racho muchiKusaal
Samuel akapindura kuti: “Sori hatina. Asi tine mabhurocha echiFrafra,” mutauro wakada kufanana nechiKusaal. Enoch asati aenda kumba kwake, akakumbira mabhuku kuti azopawo hama dzake.
Enoch paakazodzokera kuAnkasie, akaenda kunopa Samuel mapepa ainge akanyorwa. Enoch akanga atoshandurira bhurocha raTeerera Mwari muchiKusaal! Iye zvino ari kupinda misangano nekudzidza Bhaibheri.